Kulan ku saabsanaa Xuquuqda Dumarka iyo Dastuurka oo lagu qabtay Mogadishu – Kalfadhi
Kulan ku saabsanaa Xuquuqda Dumarka iyo Dastuurka oo lagu qabtay Mogadishu
Xubno ka tirsan Guddiga KMG ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka Qaranka ee Golaha Shacabka, Xildhibaanno, qaar kamid ah axzaabta siyaasada, Wasaaradda Dastuurka, ururadda haweenka iyo Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka ee Soomaaliya Xaliimo Yarey, ayaa shalay ka qeyb-gallay kulan si gaar ah looga hadlayay Xuquuqda Dumarka iyo Dastuurka.
Kulanka intii uu socday ayaa waxaa laga dooday qodobo ay kamid ahayeen in Dastuurta cusub ee diyaarintiisa ay hadda socoto in lagu daro tiro cayiman oo kuraas Baarlamaan ah oo dumarka u gaar ah, kuwaas oo aan ragga ku tartami karin.
Hay’addaha kulanka lagu casuumay ayaa dhammaan waxaa ay ahaayeen hay’addaha bahda ku ah dib-u-eegista dastuurka. “Haddii 2020/2021, la qabto doorasho haddana kuraasta haweenka ay ka hooseyso doorashii lasoo dhaafay, waxaan rabnaa in eedaasi uusan qaadanin guddiga Doorashooyinka Qaranka, ee haddaba aan iska soo bandhigno, si doodo looga sameeyo”, ayey tiri Xaliima Yarey.
“Dastuurka waxaa ku qoran in xuquuqda loo sinaado, xuquuqda looma sinaan karo sida hadda ay ku socoto maxaa yeelay awooda dowladnimadda hadda waxaa uu u liicayaa dhanka ragga. Dumarka iyo ragga meesha ay ka joogaan siyaasada isma lahan”, ayey sii raacisay hadalkeeda.
Haweenka ayaa sidoo kale ku baaqay in la helo sinaan hanaanka siyaasadeed ah iyo in la siiyo fursado, maadaama ay yihiin laf dhabarka Bulshada.